अनुहारमा सँधै चमक ल्याउन चाहानुहुन्छ ? यसरी बनाउनुस् घरायसी प्याक | Samajik Khabar
Home अन्य अनुहारमा सँधै चमक ल्याउन चाहानुहुन्छ ? यसरी बनाउनुस् घरायसी प्याक
अनुहारमा सँधै चमक ल्याउन चाहानुहुन्छ ? यसरी बनाउनुस् घरायसी प्याक
अनुहार फुस्रो हुने, चाया आउने, फुट्नेजस्ता समस्याले आम व्यक्तिलाई सताउने गर्छ ।
यस्तो समस्याको सिकार महिला तथा पुरुष दुवै हुने गरेको पाइन्छ । यस्ता समस्याबाट छुटकार पाउनका लागि घरयसी सामाग्रीहरुबाट सजिलो प्याक बनाउन सकिन्छ ।
Previous articleअवैध गिट्टीबालुवा उत्खनन्‌को विरोध गर्ने एक युवाको नियोजित ढंगले टिपरले किचेर हत्या
Next articleझारा टार्नमा सीमित नहोस् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम